ट्राफिक प्रहरीले नै ताेड्छन् सवारी नियम : सेयर गरौ ! – Life Nepali
ट्राफिक प्रहरीले नै ताेड्छन् सवारी नियम : सेयर गरौ !
काठमाडौं । सर्वसाधारणले सवारी नियम उल्लंघन गरे ट्राफिक प्रहरीले का’रबाही गर्छ । तर जब ट्राफिक प्रहरीबाटै नियम मिचिन्छ, कसले कारबाही गर्ने ? यही प्रश्न मनमा उब्जिन्छ, जब हाफ बार भएका मिनी (वान टन) ट्रकमा ट्राफिक प्रहरी नि’र्धक्क यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् । ट्राफिक नियमानुसार ट्रकमा यात्रु बोक्न पाइँदैन किनभने यो मालबाहक सवारी हो । ट्रकको पछिल्लो भागमा असुरक्षित तवरले कुनै सर्वसाधारण यात्रुले यात्रा गरे ट्राफिकले चालकलाई त का’रबाही गर्छ नै यात्रुलाई पनि ओरालेर सचेत गराउँछ ।
तर त्यही काम ट्राफिक प्रहरीले गर्दा कसले समात्ने ? त्यसैले त मानिसहरूलाई लाग्छ, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकाल मिनीट्रकमा यात्रा गर्नु ट्राफिक प्रहरीको बाध्यता भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा धेरै स्थानमा जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्ने भयो भने महाशाखाको ट्रक प्रयोग गरिन्छ । फोटो दिल निशानी मगर अनलाइनखबरबाट
आधा भागमा बार लगाएको ट्रकमा धेरैजसो समय ट्राफिक प्रहरी कोचिएर यात्रा गर्छन् । बस्ने ठाउँ पनि नभएपछि कतिपय ट्राफिक बारको डिलमा समेत बस्नुपर्छ । महाशाखासँग ट्राफिक प्रहरीलाई सुरक्षित रूपमा यात्रा गराउन सवारीसाधन नभएकै हो त ? महाशाखाका प्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘महाशाखाले अहिले साधन स्रोत विगतमा भन्दा धेरै पाएको छ, तर बसचाहिँ हामीसँग छैन । कतिपय अवस्थामा एउटा बसमा मात्रै टोली लैजान सम्भव नहुने अवस्था पनि हुन्छ ।’
कतै ठूला समारोह भएका र भैपरी आएका स्थानमा सम्बन्धित ट्राफिक इकाईबाट सम्भव नहुने भएपछि बग्गीखानाबाट ट्राफिक प्रहरीहरु पठाउने गरिएको छ । ढकाल यस्तो दृश्य बाध्यात्मक परिस्थितिमा देखिने गरेको बताउँछन् । ढिला पुग्दा अर्को समस्या आइसक्ने भएकाले टोलीलाई एकैपटक परिचालन गर्दा ट्रकमै यात्रा गराउनुपर्ने उनको कथन छ । उनले उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिइदिन आग्रह गरे ।
‘हामीसँग भएको भ्यानमा पनि नअटाउने अवस्था आएपछि ट्रकमा निकाल्ने गरेका छौं’, उनले भने, ‘सर्वसधारणले ट्राफिकले यस्तो नगरिदिओस् भन्ने चाहनु ठीकै हो । हामी यसलाई सकेसम्म व्यवस्थित गर्न प्रयत्न गर्नेछौं ।’ ढकाल नागरिकहरु आफैं ट्राफिक नियमबारे सचेत भएर उठाउने प्रश्न सकारात्मक भएको बताउँछन् । यस्ता प्रश्नले ट्राफिकलाई थप सचेत बनाउन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । एक ट्राफिक प्रहरी अधिकारी भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सु’रक्षाकर्मीको ओसारपसार ट्रकमै हुने गरेको तर्क गर्छन् । तर, यस्तो यात्रालाई सु’रक्षित गर्न भने जुरुरी रहेको उनको पनि तर्क छ ।
हाल ट्राफिकलाई मात्रै होइन, सिभिल प्रहरी ओसार्ने तरिका पनि यस्तै भएको उनले बताए ।
‘विशिष्ट अतिथिहरुको आगमनका बेला हामीलाई प्रहरी हेडक्वार्टरबाट बस दिइन्छ, अरू बेला हामीसँग भएको ३–४ वटा वान टन ट्रकबाट काम चलाइरहेका छौं’, उनले भने । हाल उपत्यकामा १ हजार ३ सय ६८ जना ट्राफिक प्रहरी छन् । विभिन्न ४० वटा इकाईमा विभाजित भएर उनीहरुले सेवा दिँदै आएका छन् । तर सीमित स्रोतका का’रण यात्रुलाई ट्राफिक नियम सिकाउने उनीहरुले कतिपय अवस्थामा आफैं नियम मिच्नुपर्ने अवस्था छ ।
Previous हेर्नुहोस् : यो हो नेपालको खास नक्सा र जमिन (भिडियो )
Next मोहन लामा ज्युको यो लेख (नेपालीलाइ पढ्न नि:षेध) पुरा पढेर सेयर गरौ !